दुई बर्षा तीजको गीतमा यसरी छमछमी नाचे (भिडियो सहित) - Visit rara lake in Nepal.
दुई बर्षा तीजको गीतमा यसरी छमछमी नाचे (भिडियो सहित)
संवाददाता : रारा सञ्चार प्रकाशित मिति : २६ असार २०७४, सोमबार ०८:२५ प्रकाशित मिति : जुलाई 10, 2017
चलचित्र क्षेत्रमा नायिकाद्धय बर्षा राउत र बर्षा सिवाकोटीको राम्रै चर्चा छ । यी दुइविच शितयुद्ध चलिरहेको छ भन्ने खालका समाचार पनि सार्वजनिक नभएका होइनन् । तर, यी दुइ अहिले आफूहरु मिल्ने साथी भएको बताउँछन् ।
यी दुइलाई लिएर म्यूजिक भिडियो निर्देशक तथा संचारकर्मी सुव्रत आचार्यले तयार पारेको एक तीजको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । राजकुमार बगरको शब्द तथा सुदाम थापाको संगीत रहेको यो गीतमा गायिका सिन्धु मल्लको आवाज छ ।
अहिलेको तीजैमा नाचौ छमछम’ बोलको यस गीतमा दुइ बर्षालाई नचाउने काम भने नृत्य निर्देशक गम्भीर विष्टले गरेका छन् । दुई बर्षाको दुश्मनीको हल्लालाई झुटो हो भन्ने देखाउन पनि आफूले एकसाथ दुइलाई काम गराएको निर्देशक आचार्य बताउँछन् ।
अर्जुन तिवारीको छायांकन रहेको गीतको भिडियोलाई भरत रेग्मीले सम्पादन गरेका हुन् । दुइ बर्षाले पनि एकसाथ काम गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए ।
खुमनको तीज गीतमा शंकर र करिश्माको प्रेम (भिडियो सहित)
‘धनपति’को सुखद ओपनिङ, आजबाट के होला ?
२६ असार २०७४, सोमबार ०८:२४
मुगाली युवा देवेन्द्र अभिनिती गित सार्वजनिक (भिडियो सहित)
३१ असार २०७४, शनिबार ०९:११